Kọmputa na desktọpụ bụ modular, na-enye ohere ngbanwe ngwa ngwa, yana inwekwu ohere maka mgbasawanye. Kama, a ebum n'obi na kọmputa a na-ebugharị ebugharị ka ọ bụrụ kọmpat na ha nwere obere ohere. A na-ebuli ụda niile dị ka ọ nabata ihe niile. Nke a na-eme ka ụfọdụ ndị na-emepụta ihe kpebie ịre ụfọdụ ihe dịka RAM ma ọ bụ ebe nchekwa flash.
N'ọnọdụ ndị ahụ, onye ọrụ agaghị enwe ike gbanwee modul ebe nchekwa isi ma ọ bụrụ na ọ mebiri ma ọ bụ gbanwee ya ka ọ buru ibu. Agbanyeghị, ụfọdụ kọmpụta nwere ike ịnwe akụkụ nke RAM agbadoro na motherboard, ọkachasị ultrabooks nwere ụdị ncheta LPDDR, mana nwee oghere mgbakwunye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa ya. N'ịbụ ndị nwere nnukwu mgbagwoju anya, na ntuziaka a, ị ga-enwe ike dozie obi abụọ gị wee chọpụta ma ị nwere ike ịgbasa RAM na laptọọpụ gị ma ọ bụ na ị gaghị agbasa ...
1 Ihe ị kwesịrị ịma ka ị nwee ike ịgbasa ebule na laptọọpụ
2 Ụdị ebe nchekwa RAM
2.1 Oghere efu
2.2 Oke RAM nke akwụkwọ ndetu kwadoro
3 Ị nwere ike ịgwakọta modul RAM nke otu ụdị mana yana ọtụtụ MHZ?
4 Na obere MHZ?
5 Otu esi etinye ebe nchekwa RAM na laptọọpụ
Ihe ị kwesịrị ịma ka ị nwee ike ịgbasa ebule na laptọọpụ
Iji nwee ike ịgbasa ebe nchekwa RAM ma ghara imehie ihe, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma ụfọdụ parameters nke ị rụnyerelarị wee mara na a na-akwado modul ị zụrụ. Tụkwasị na nke a, ana m akwado ka ị gụọ akwụkwọ ntuziaka nke ihe nlereanya gị kpọmkwem iji dokwuo anya obi abụọ, ọ bụghị naanị ma ị nwere ike ịgbasa ma ọ bụ na ị gaghị agbasa, kamakwa banyere ikike kachasị na-akwado usoro gị na ụdị dịnụ. Cheta na enwere ike ibudata akwụkwọ ntuziaka ndị a na webụsaịtị gọọmentị nke ndị nrụpụta akụrụngwa gị.
Banyere paramita ndị ahụ ị ghaghị ịma Tupu i kpebie ịgbasa ebe nchekwa RAM gị na laptọọpụ, ihe ndị a pụtara:
Ụdị ebe nchekwa RAM
RAM dị mkpa ...
RAM dị mkpa CT8G4SFS824A ...
Komputerbay - ebe nchekwa RAM ...
Ihe mbụ ga-abụ ịmara ụdị RAM ị nwere. RAM akwụkwọ ndetu na-abụkarị SO-DIMM, nke bụ modul kọmpat karịa DIMM desktọpụ nkịtị. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịma ma ọ bụ DDR3, DDR4 ebe nchekwa, wdg. Iji chọpụta, ị nwere ike họrọ ọtụtụ ụzọ ọzọ:
Usoro njikwa: Na akara panel nke sistemụ arụmọrụ n'onwe ya ị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ nkọwa ngwaike.
Dịka ọmụmaatụ, otu ụzọ isi lelee ya na Windows bụ site na ịpị Ctrl + Alt + Surp ka ịbanye Task Manager na taabụ RAM ị nwere ike ịhụ ikike, ojiji, ugboro, wdg.
Na macOS Ị nwere ike ịga n'elu mmanya, Banyere Mac a, na na nchịkọta nchịkọta, ị ga-ahụ ike, ụdị, na ugboro ole.
Na GNU / Linux ị nwere ike ime ihe yiri ya site na eserese eserese ma ọ bụ jiri iwu "sudo dmidecode -ụdị ebe nchekwa | obere ”na-enweghị nkwuputa.
software: enwere ọtụtụ mmemme iji mata nke a. Dịka ọmụmaatụ, AIDA64 na Windows, ma ọ bụ CPU-Z. Ị nwekwara ike iji hwinfo na Linux, ma ọ bụ CPU-X. Na macOS ị nwekwara ngwa dị ka CheckMyMac, Systempal, wdg. dị n'aka gị. N'ime mmemme ndị a, ị ga-ahụ ngalaba raara nye RAM ebe ị nwere ike ịchọpụta ikike, ugboro elekere, ụdị, oghere, latency, wdg.
Ihe mmado nke laptọọpụ- Laptọọpụ na-enwekarị ihe mmado rapaara n'azụ ma ọ bụ n'akụkụ akara aka nwere ụfọdụ njirimara, dị ka ụdị RAM na ike ya. N'ebe ahụ ị nwekwara ike ịchọpụta nke ị nwere.
Akwụkwọ ntuziaka nke ihe nlereanya gị: Mgbe ịzụrụ laptọọpụ, nkọwa teknụzụ na-achọpụtakarị ụdị ebe nchekwa ọ na-ebuli. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwekwara ike ịlele ya site na nbudata akwụkwọ ntuziaka PDF nke ụdị ịzụrụ na nke ị ga-ahụ na webụsaịtị ndị na-ebubata ya.
Hụ onyinye na modul RAM laptọọpụ
Iji tinye modul RAM ma gbasaa ebe nchekwa ị ga-achọ inwe oghere efu. Ụfọdụ laptọọpụ enweghị oghere, na-eresị-na RAM, karịsịa ultrabooks nwere ụdị LPDDR (obere ike). Ndị ọzọ nwere oghere ma ọ bụ abụọ, mana modul nke kọmpụta ahụ gụnyegoro na-ejupụta ha. N'okwu a, ị ga-achọ iji dochie modul dị ugbu a na otu ikike dị ukwuu ma si otú a mee ọganihu na arụmọrụ. Na nhọrọ nke atọ bụ na ọ nwere oghere n'efu, yabụ ị zụtara modul ọzọ ma tinye ya na ndị dị adị iji gbakwunye na ikike ahụ. Iji chọpụta ma ọ nwere oghere efu ma ọ bụ na o nweghị, ị nwere ike ịlele akwụkwọ ntuziaka nke ụdị gị, nkọwa teknụzụ ya, ma ọ bụ gaa n'ihu ozugbo mepee laptọọpụ wee hụ ma ọ nwere oghere efu.
Oke RAM nke akwụkwọ ndetu kwadoro
Ọ bụ ihe ọzọ a ga-echebara echiche. Nke a ga-adabere na ikpo okwu, karịsịa nke CPU ma ọ bụ chipset kpaara ókè. Iji chọpụta ebe nchekwa ole ọ na-akwado, ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ ntuziaka nke onye na-emepụta laptọọpụ gị. Ọ bụrụ na ị maara kpọmkwem ụdị (ị nwere ike ịhụ ya na ihe mmado n'okpuru laptọọpụ), ị nwere ike ịnweta ebe nbudata nke webụsaịtị gọọmentị wee budata ya na PDF iji chọpụta oke ike ọ na-akwado. Agbanyeghị, maka ọnụọgụ nke 8, 16, 32, na ọbụna 64 GB enweghị nsogbu n'ọtụtụ ọnọdụ, ọkachasị na sistemụ arụmọrụ 64-bit.
Ọ bụrụ na ị matalarị ụdị RAM ị ga-azụta, ị nwere ike ịhụ modul ị chọrọ a njikọ.
Ị nwere ike ịgwakọta modul RAM nke otu ụdị mana yana ọtụtụ MHZ?
Otu n'ime enwekarị obi abụọ Mgbe ị na-azụta modul RAM ọhụrụ maka laptọọpụ bụ nkọwapụta nke kwesịrị inwe. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ọmụmaatụ ị nwere Crucial DDR4 2666Mhz RAM nke 4 GB na CL19, ị gaghị azụta modul ọzọ nke otu ikike, akara, latency, ma ọ bụ ọsọ. Naanị ihe ịchọrọ ichegbu onwe gị maka ndakọrịta bụ na ọ bụ otu ụdị (DDR4) dabara adaba maka oghere gị (dịka: SO-DIMM).
Modul nke abụọ nwere ike ịbụ Corsari DDR4 3200 Mhz nke 8 GB na CL16 nke ọma, nke ga-agbakwunye na 4 + 8 = 12GB. Naanị ị ga-atụle ihe gbasara arụmọrụ. Ee latency dị elu ma ugboro ole dị ala, usoro ahụ ga-arụ ọrụ na-emegharị na modul arụmọrụ kachasị njọ. Ya mere, ọ nwere ike ọ gaghị aba uru ịgwakọta n'ihi na ị nwere ike izute adịghị ike. Ya mere, ka mma mee ka ha nwee otu oge na ugboro ole.
Na obere MHZ?
N'akụkụ nke gara aga, azaworị m nke a. Ị nwere ike iji modul ọhụrụ obere oge, mana na-ewere ihe ize ndụ. Buru n'uche na ọ bụrụ na modul 1st gị na-arụ ọrụ na ugboro X na modul 2 ọhụrụ na-arụ ọrụ na X-1, mgbe ahụ, a ga-edozi usoro ahụ ka ọ rụọ ọrụ na X-1 ma mee ka ha abụọ, nke ga-abụ ikike dị elu, ma ọ dị ntakịrị. arụmọrụ dị elu. dị ala n'ihe gbasara oge. Ya mere, ọ bara uru? Echeghị m otu ahụ…
Otu esi etinye ebe nchekwa RAM na laptọọpụ
Iji nwee ike ịwụnye ebe nchekwa RAM na laptọọpụ, usoro iji soro N'ụzọ zuru oke, ebe ọ bụ na ọ bụghị otu ihe ahụ na ndị nrụpụta laptọọpụ niile, ha bụ:
Ozugbo ị nwetachara modul RAM a zụrụ, kwụpụ laptọọpụ na ọkụ ọkụ wee wepụ batrị ya ka ịzenarị ihe mberede.
Jide n'aka na ị na-achịkọta ngwaọrụ niile dị mkpa iji mepee ngwa ahụ. N'ozuzu, Philips ma ọ bụ nkenke ụdị screwdriver na-ezukarị. Na mgbakwunye, ọ gaghị afụ ụfụ ịnwe eriri antistatic iji zere imebi ibe mgbe emetụrụ ya aka. Ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị na-eme, ọ ka mma ịhapụ ya n'aka onye ọrụ nka. Ọ bụrụ na ị nwere isi ihe ọmụma na-eme ya, cheta na-enwe ka mara ebe ọ bụla ịghasa ma ọ bụ akụrụngwa na ị na-ewepụ n'oge usoro na-aga. Ana m akwado ka ị see foto wee hụ ka ọ dị.
Ugbu a bụ oge imepe laptọọpụ iji nweta oghere SO-DIMM ebe ị ga-etinye modul ọhụrụ ahụ. Laptọọpụ ndị ochie na-enwekarị mkpuchi skru-na-enye ohere ịnweta ohere dị mfe, naanị ị ga-ewepụ skru ole na ole n'azụ. N'aka nke ọzọ, ultrabooks na akwụkwọ ndetu nke oge a na-eme ka ọ dịkwuoro gị ike, na ị ga-ewepụ ụfọdụ skru na azụ wee wepụ mkpuchi ma ọ bụ etiti nke keyboard nke na-abịa na ntinye akwụkwọ. Ozugbo ewepụrụ ya, ọ na-enye gị ohere ịnweta skru ndị ọzọ ga-enye gị ohere iwepu ikpe ahụ wee banye na motherboard nke laptọọpụ. N'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-agụnye iwepu kiiboodu na panel touchpad, ma ọ bụ eriri ngosi, wdg.
Chọta ebe oghere SO-DIMM dị na kọmputa gị ebe etinyere modul ọzọ ị nweburu. Ma ọ bụrụ na ị ga-eji dochie ya, wepụ nke ochie ma jiri nke ọhụrụ dochie ya. Ọ bụrụ na enwere oghere efu, tinye modul ọhụrụ na oghere ọhụrụ ahụ. Iji mee nke a, naanị ị ga-ebufe ntụtụ ígwè dị n'akụkụ akụkụ nke modul ahụ n'akụkụ iji hapụ modul ahụ, ị ​​​​ga-ahụkwa na ọ na-esi n'ọnọdụ ụgha gaa na-atụgharị ntakịrị. Mgbe ahụ ị nwere ike wepu ya ma ọ bụ tinye modul. Echegbula onwe gị maka polarity, ọ dabara n'otu ụzọ ekele maka oke iwe o nwere. Ozugbo etinyere ya, pịa modul ahụ laghachi n'ọnọdụ dị larịị wee jidekwa ya ọzọ site na ntụtụ ahụ.
Ozugbo etinyere ya, ihe na-esote ga-abụ ịchịkọta akụkụ niile wepụrụ wee hapụ kọmpụta ahụ agbakọta.
Mgbe ijide n'aka na ihe niile dị mma, jikọọ batrị ma ọ bụ ike wee malite ịgbanwuo akụrụngwa gị. Ma na BIOS / UEFI, na na sistemụ arụmọrụ, ọ ga-abụrịrị na a ghọtara ikike RAM ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, lelee usoro ndị a dị n'elu, ọ nwere ike ọ gaghị adị mma ma ọ bụ enwere ike ịnwe nsogbu ndakọrịta ọzọ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nduzi » Otu esi amata ma enwere m ike ịgbasa ebe nchekwa RAM nke laptọọpụ m